California Inova Nyika Yekutanga Kurambidza Mabhegi ePlastiki
California Gavhuna Jerry Brown akasaina mutemo weChipiri unoita kuti nyika ive yekutanga munyika kurambidza mabhegi epurasitiki anoshandiswa kamwe chete. Kurambidzwa uku kuchatanga kushanda muna Chikunguru 2015, kurambidza zvitoro zvikuru zvegirosari kushandisa zvinhu izvo zvinowanzoguma zvaita marara mumigwagwa yemvura yehurumende. Mudiki bhu...
The Patron Saint wePlastiki Mabhegi
Mumusangano wezvikonzero zvakarasika, kudzivirira bhegi regirosari repurasitiki rinoratidzika kunge riri kumusoro uko nekutsigira kuputa mundege kana kuponda kwevana. Ibhegi jena rinowanikwa pose pose rakati nyangarara richipinda munzvimbo yekunetsa veruzhinji, chiratidzo chemarara uye kuwandisa uye mu...
Vagadziri vemabhegi epurasitiki vanozvipira kune makumi maviri muzana zvakadzokororwa zvemukati panosvika 2025
Indasitiri yemabhegi epurasitiki musi waNdira 30 yakaparura kuzvipira kwekuzvidira kusimudzira zvinhu zvakadzokororwa mumabhegi ezvitoro kusvika pa20 muzana panosvika 2025 sechikamu chechirongwa chekusimudzira. Pasi pechirongwa ichi, indasitiri huru yekutengeserana kweUS boka iri kuzvishandura seAmerican Recyclabl...
'Ramba wakangwarira': Zvidzidzo zveCDC zvinoratidza kudzikira kweCCID vaccine kushanda sezvo delta musiyano inotsvaira US
Kusadzivirirwa kuCCIDID-19 kubva kumajekiseni kunogona kunge kuri kudzikira nekufamba kwenguva sezvo inotapukira zvakanyanya delta musiyano uripo munyika yose, sekutsvagurudza kutsva kubva kuCenters for Disease Control and Prevention. Ongororo yakaburitswa neChipiri yakaratidza kushanda kwevaccine kwadzikira pakati pevashandi vehutano ...
Robot pandas uye bhodhi zvikabudura: Mauto eChinese anotangisa mutsara wembatya dzekutakura ndege
Vatakuri vendege vakanaka. Chero ani akamboona "Top Gun" anogona kupupurira izvozvo. Asi mauto emugungwa mashoma epasi rose ane unyanzvi hwokugadzira zvinhu uye unyanzvi hwokuavaka. Muna 2017, China's People's Liberation Army Navy (PLAN) yakabatana neiyo c ...
Utachiona huri kuwedzera uye 'zvinhu zvichawedzera kuipa,' Fauci anoti; Florida inotyora imwe rekodhi: Rarama COVID inogadziridza
US inogona kunge isingaone kuvharika kwakatambudza nyika gore rapfuura kunyangwe hutachiona hwawedzera, asi "zvinhu zvichatonyanya kuipa," Dr. Anthony Fauci vakayambira neSvondo. Fauci, achitenderera panhau dzemangwanani anoratidza kuti hafu yevanhu vekuAmerica yakabaiwa. Kuti, h...
Los Angeles County inodzoreredza masikirwo emukati memba kune vese sezvo nyaya dzekoronavirus dzichikwira munyika yose
Los Angeles County yakazivisa nemusi weChina kuti ichamutsiridza mutemo wemasiki emukati unoshanda kune wese munhu zvisinei nemamiriro ekudzivirira nekuda kwekukwira kwenyaya dzekoronavirus uye kuchipatara kwakabatana neinotapuriranwa zvakanyanya delta musiyano. Kurongeka kwekutanga kushanda manheru eMugovera manheru mu...
Vanenge vese kufa kweCCIDID muUS ikozvino pakati pevasina kuvharirwa; Sydney inosimbisa zvirambidzo zvedenda mukati mekubuda: Yezvino COVID-19 inogadziridza
Vanoda kufa vese veCCIDID-19 muUS vari pakati pevanhu vasina kubatika, sekureva kwedata rehurumende rakaongororwa neAssociated Press. "Breakthrough" hutachiona, kana nyaya dzeCCIDID mune avo vakabayiwa zvizere, dzakaverengera zviuru zana nemakumi maviri nevanopfuura 853,000 muzvipatara muUS, zvichiita kuti ive 0.1% yekurapwa ...
CDC inosimudza indoor mask dhairekitori kune vanhu vakabayiwa zvizere. Zvinorevei chaizvoizvo?
The Centers for Disease Control and Prevention yakazivisa mitsva yekuvharisa nhungamiro neChina inotakura mazwi anogamuchirwa: Vanhu vekuAmerica vakanyatsobaiwa, kazhinji, havachadi kupfeka masiki mukati. Sangano iri rakatiwo vanhu vakabayiwa zvizere havafanirwe kupfeka masiki kunze, kunyangwe mune vanhu vakawanda ...
Nyanzvi dzeUS dzinoshora EU sarudzo yekumbomira mushonga weAstraZeneca; Texas, 'Vhura zana muzana,' ine nyika yechitatu-yakaipisisa chiyero chekudzivirira: Rarama COVID-19 inogadziridza.
Duke University, yatove kushanda yakavharika kurwisa kukwira kwehutachiona hwekoronavirus, nemusi weChipiri yakashuma mazana maviri nemakumi matatu nenomwe kubva svondo rapfuura, dzinenge dzakawanda semesita yekudonha kwechikoro. "Iyi yaive nhamba yepamusoro yenyaya dzakanaka dzakataurwa musvondo rimwe chete," chikoro ...
GRIM TALLY Britain ikozvino ine huwandu hwepamusoro hwekufa kweCovid munyika nekufa kwevanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemashanu pazuva, chidzidzo chinowana.
UK ikozvino ine huwandu hwepamusoro hwekufa kubva kukoronavirus munyika, chidzidzo chitsva chakaratidza. Britain yakunda Czech Republic, iyo yakanga yaona Coviddeaths pamunhu kubva muna Ndira 11, sekureva kwazvino data. Britain ine huwandu hwepamusoro hwekufa kweCovid pasi rose, ine hosp ...
Dr Hilary veGMB vanopa yambiro yakasimba pamusoro pemaitiro emusupamaketi 'sei kuisa njodzi?'
na admin pa 21-01-12
Good Morning Britain Dr Hilary Jones vakayambira vaoni kuti vangwarire muzvitoro zvikuru uye vayeuke kuti vasambotora zvinhu vozozvidzosera. Dr Hilary vaikurukura nevatambi Piers Morgan naSusanna Reid pamusoro pekuti isu tichiri kuda kungwarira nezve zvingangopararira ...